Gabadh Madaxweyne Siilaanyo Dhalay Oo Caawa Xafladda Meherkeeda Lagu Qaban Doono Qasriga Madaxtooyada – Djiboutination
HomeNews Gabadh Madaxweyne Siilaanyo Dhalay Oo Caawa Xafladda Meherkeeda Lagu Qaban Doono Qasriga Madaxtooyada Gabadh Madaxweyne Siilaanyo Dhalay Oo Caawa Xafladda Meherkeeda Lagu Qaban Doono Qasriga Madaxtooyada
- September 19, 2014 - in News 275 0 script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
Aqalka Madaxtooyada Somaliland, ayaa si weyn ugu mashquulsan qaban qaabada xafladda Meherka gabadh uu madaxweyne Silaanyo dhalay oo ay is calmadeen Wiil kasoo jeeda Beesha Madaxweynaha.
Munaasibadda ayaa qabanqaabadeeda si weyn looga dareemayaa aqalka dalka looga taliyo, waxana hawsha wada oo ku jira Wasiirro iyo xubno saaxiib dhaw la ah madaxweynaha iyo haweenaydiisa, kuwaas oo si hagar la’aan ah u qabanqaabinaya xafladda.
Munaasibadda ayaa lagu wadaa inay Caawa dhaco, waxana Meherka labada is calmaday kasoo qaybgeli doono siyaasiyiin tiro badan iyo cuqaal reer Somaliland ah, kuwaas oo lagu casuumay qasriga madaxtooyada si ay marag uga noqdaan Meherka qoyskaas kusoo biiray Reerka Madaxweyne Siilaanyo.
Madaxweyne Siilaanyo, ayaa la sheegayaa inaanu raalli ka ahayn in aqalka Bulshadu wada Leedahay inantiisa loogu qabto xafladda Meherkeeda, balse Marwada ayaa iyagu ku adkaysatay inay ka dhacdo xafladdu qasriga, halka uu madaxweyne Siilaanyo soo jeediyey in hutellada lagu qabto sida kaleba yeelaan.
Sida wararku sheegayaan waxa uu madaxweyne siilaanyo qoyskiisa u sheegay in qasrigu yahay meel shacabku wada leeyahay, isla-markaan aanay Haboonayn in munaasibad reerkiisa u gaar ah lagu qabto, waxase muran ka keentay Marwada koowaad oo sheegtay inay xaq u leeyihiin inay farxadddan oo kale ku qabsadaan.
Labada dhallinyarada ah ee is calmaday, ayaa ah qurbejoog. Dalka dibaddiisa ku maqan, waxana farxaddooda laga dhigay mid Somaliland oo dhan laga hadal hayo oo dadku ku sheekaysanayaan.
Taariikhda Somaliland wali ma dhicin in madaxweyne Xilka hayaa uu ubadkiisa meherkooda ku qabto Aqalka madaxtooyada, waxana si weyn loo xasuustii aroorkii allah ha u naxariistee Marxuum Gaarriye loogu qabtay Aqalka Madaxtooyada, mudadii uu madaxweyne Rayaale Xilka hayey.
Gaarriye ayaa eebe ha u naxariistii isagu arooskiisa madaxtooyada ka hor iska reebay odhaah Caan Noqotay oo ahayd, “Aas Qaranba waan Geyaaye Miyaanan Aroos Qaran Geyin”, taas oo markii dambe loogu qabtay aroos qaran oo qaayo Badnaa.
Taarikhdan cusub ee Madaxweyne siilaanyo kusoo kordhiyey Somaliland ee ah inuu Inantiisa meherkeedii ugu qabtay guriga umadda, ayaa waxa dhawaan middan oo kale sameeyey madaxweynaha Djibouti oo gabadh uu dhalay sidan oo kale aqalka madaxtoyada ugu bixiyey, taas oo xataa masuuliyiin reer Somaliland ahi ukala dheereeyeen tegitaankeeda.
Previous article .S. military personnel rescued at sea after helicopter crash near Djibouti Next article DAAWO:Rayisal W.Somaaliya oo la waydiiyay wadahadalada SL iyo Somaliya iyo hadii SL afti laga qaado sida Scotland About the author djibouti